Chondrosarcoma (benign sarcoma - kansa ọrịa kansa ọkpụkpụ)
Chondrosarcoma, nke a makwaara dị ka sarcoma ọkpụkpụ, bụ ọrịa ọjọọ ọkpụkpụ nke mejupụtara mkpụrụ ndụ kansa kansa dị na cartilage. Chondrosarcoma na-emetụtakarị ndị okenye. N'adịghị ka ọtụtụ ọrịa cancer ndị ọzọ, ọrịa kansa a na-enwekarị ohere ịgbasa (metastasis), ebe ọ bụ na ha na-enwekarị uto nwayọ nwayọ, mana nke a anaghị emetụta chondrosarcomas niile. Dị kansa a dị njọ, nke pụtara na ọ ga-agbasa ma nwee ike ịnwụ. Dabere na SNL (Store Norske Leksikon), enwere ihe dịka ọrịa 10 ọhụrụ a na Norway kwa afọ.
- Achọrọ biopsy iji chọpụta
Nanị ụzọ dị mma iji gwọọ ọrịa bụ site na iji usoro ndu (anụ ahụ) nke mpaghara emetụtara. Nnyocha ọbara, ule mmamịrị, nyocha nke ọkpụkpụ (nyocha Dexa), nyocha X-ray na onyonyo nwekwara ike ịba uru na usoro nchọpụta.
- The ọgwụgwọ mejupụtara ịwa ahụ na curettage
Condroma sarcoma anaghị azaghachi ọgwụ chemotherapy ma ọ bụ ọgwụgwọ radieshon. A na-ejikarị ịwa ahụ arụ ọrụ na kansa - na chondrosarcomas nwere uto dị ala, usoro ịkpụcha akpọ curettage tupu iji mmiri nitrogen, phenol ma ọ bụ argon iji gbuo mkpụrụ ndụ kansa cancer ndị fọdụrụ na elu ọkpụkpụ. Ndị dọkịta na-awa ahụ ga-akpachara anya mgbe ha na-ewepu ọrịa kansa dị otú a, n'ihi na nbipu ezighi ezi nwere ike ibute mkpụrụ ndụ kansa na mpaghara - nke nwekwara ike ibute mbido ọrịa kansa. Mbepu nke mpaghara emetụtara anaghị adịkarị mkpa. Ihe karịrị 75% nke ndị emetụta metụtara na-adị ndụ ma ọ bụrụ na ewepụrụ akpụ cancer niile.
- Nyocha mgbe niile
N'ihe banyere nbibi ma ọ bụ ihe yiri ya, ndị mmadụ ga-aga nyocha ịchọpụta ma ọ bụrụ na mmepe ma ọ bụ ọganiihu etolitela. A na-eme nke a na nnwale ọbara dị mma, ule mmamịrị, x-ụzarị (lee Onyonyo) ịkọ atụmatụ nha ọ bụla ma ọ bụ oge ntoju. Kwa ọnwa isii ma ọ bụ kwa afọ, X-ray nwere ike ịdị mkpa, mana enwere ike iwe ya obere oge ma ọ bụrụ na enweghị mmepe ọ bụla.